Wararka Maanta: Sabti, Apr 14, 2012-Madaxweyne Shariif oo Magaacaabay Guddiga Dowladda KMG Somalia uga qaybgalaya Wadahadallada Somaliland
Madaxweyne Shariif oo Magaacaabay Guddiga Dowladda KMG Somalia uga qaybgalaya Wadahadallada Somaliland Sabti, Abriil 14, 2012 (HOL) — Madaxweynaha Soomaaliya ayaa magacaabay guddi heer wasiir ah oo dowladda KMG ah uga qaybgalaya wadahadallada lala furayo Somaliland, waxaana guddigan uu madax uga dhigay wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka Qaranka, C/samad Maxamuud Xasan.
Guddigan ayaa waxay ka kooban yihiin toddoba xubnood, waxanaa madaxweynuhu uu magacaabay waxyar ka hor intii uusan saakay oo Sabti ah u dhoofin magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya oo uu kaga qaybgalayo shirka madaxda ururka Midowga Afrika.
Sheekh Shariif wuxuu sheegay in guddigan ay wadahadallo la yeelan doonaan guddi ay Somaliland u magacowday dhawaan wadahadallo lala galo dowladda KMG ah ee Soomaaliya, isagoo sheegay inay ku kulmi doonaan magaalada London ee dalka Britain.
Guddigan oo ay ka mid yihiin. wasiirka garsoorka iyo cadaaladda DKMG ah, Axmed Xasan Gaboobe iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya, C/llaahi Xaaji Xasan Maxamed aya waxaa kaloo ku jira laba wasiir oo ka tirsan maamulka Puntland, kuwaasoo kala ah: wasiirka arrimaha gudaha, Jen. C/llaahi Axmed Jaamac (Ilka-jiir) iyo wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland, Daa'uud Maxamed Cumar.Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Maxamed Cali ayaa isagu shalay u sheegay BBC-da in maanta uu magacaabi doono guddiga dowladda KMG ah ku matalaya wadahadallada, lamana oga in ra'iisul wasaaruhu uu ku raacsan yahay guddigan madaxweynaha iyo in kale.
Dhanka kale, madaxweynaha DKMG ah wuxuu ciidamada dowladda uga digay inay dhibaateeyaan shacabka, gaar ahaan haweenka indho-shareerka iyo jalbaabka wata iyadoo lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin Al-shabaab.
Madaxweynuhu wuxuu maxkamadda sare amar ku siiyay in askarigii la qabto isagoo dadka shacabka ah dhibaateynaya la horgeeyo maxkamad, isagoo sheegay inaysan ka ogolaanayn hay'adaha xuquuqda aadanaha inay howlahooda eedeymo u soo jeediyaan.
Sabti, Abriil 14, 2012 (HOL) — Mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo lagu magacaabi jiray, C/qaadir Diiriye Maxamuud ayaa maydkisa laga helay Khamiistii lasoo dhaafay duleedka degmada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo. Xukuumadda Kenya oo shaacisay inay qabatay ruux gudaha Kenya tababar ku siin jiray xubno taageersan Al-shabaab 4/14/2012 2:21 AM EST